Kedu ihe bụ na otu esi esi kwee osimiri aja | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime ihe ịtụnanya kachasị ịtụnanya na gburugburu ụwa bụ nke aja aja. Ma obu na obu oke osimiri kariri ebe obu na obughi miri, kama obu aja. E nwere ọtụtụ echiche banyere ihe ịtụnanya a na ihe kpatara ya. O mere na Iraq ma site na vidiyo nke gbasaa ebe niile n'ụwa. Ọtụtụ ndị kwuru na ọ bụ akụkụ nke ụdị apocalypse ebe ọ bụ na ọ bụ ihe nkịtị.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe ezigbo ya bụ na ihe e ji mara osimiri aja.
1 Iche ihu igwe
2 Eziokwu nke osimiri nke ájá
3 Etu esi guzobe osimiri aja
Iche ihu igwe
Mpaghara Iraq na-apụ apụ maka ihu igwe akọrọ ebe ha nwere nnukwu aja aja. Ebe ihe a mere mere bụ Rub al Khali desert, ama ama ibu oke aja aja n’elu uwa dum. Ihe nlere a nke ihe okike jidere site na onye na-akwado vidiyo na ụbọchị ole na ole vidiyo ahụ malitere ịrịa na ụwa niile. Na vidiyo ị nwere ike ịhụ ihe omimi dị iche iche nke okike ebe ị nwere ike ịhụ ka osimiri nke ájá si aga n'etiti ọzara.
O doro anya na ụdị ọdịdị a dị ịtụnanya na-adọrọ uche nke ndị obodo niile ebe ọ dị ka ọ bụ ihe na-abụghị oke ala. Mgbe oke ikuku dị na mbara ọzara, ọ na-agakarị ọtụtụ kilomita n'ihi oke ifufe. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị elee vidiyo ahụ, anyị ga - ahụ na enweghị ikuku ọ bụla na etu aja si aga n’àkwà mmiri dịka ọ bụ mmiri mmiri. Ihe omume a ọ nwere ike ịbụ eziokwu?
Eziokwu nke osimiri nke ájá
Maka ajụjụ ma ihe ịtụnanya a nwere ike ịdị adị ma ọ bụ na ọ bụghị, ị ga-asị mba. Ihe na-asọdata dị ka osimiri abụghị aja mana ọ bụ aja ọnụ ọgụgụ dị mma nke akụ mmiri ígwé. A pụrụ ịhụ vidiyo ahụ dị ka otu n'ime ndị akaebe nke osimiri a nke ájá ruru aka ya ugbu a wee wepụ ihe yiri obere akụ mmiri mmiri.
Ma obu na n'oge ahu edere udiri onodu uzo di iche iche nke ihe di iche iche, nke gunyere otutu. Anyi aghaghi iburu n’uche na mpaghara Middle East dị nkụ ma ọ naghị enwe ụdị ọhụụ a. Mpaghara ebe achọtara osimiri a kwụpụrụ maka inwe ihu igwe akọrọ. Agbanyeghị, oke mmiri ozuzo na oke ifufe kpara ya nke butere otuto igwe bọọlụ golf ga-ada. Da bi a na mete fie no, metee nka sɛ me ho pere me sɛ mehu nea enti a ɛsɛ sɛ mete ase.
Ọ bụ mgbe oké ifufe ahụ gachara ka a hụrụ osimiri nke ájá na ihe a na-atụghị anya ya. Ezigbo mmiri nke osimiri a bụ ihe dị n'okpuru ugbu a. Ihe dị ka aja mmiri na - aga n'ihu n'ihu bụ ice. N’zara ka ha zutere nnukwu ice nke ga-aga ngwa ngwa gafee Middle East. Ma ọ bụ na nha nke bọọlụ agba mmiri ahụ buru ibu nke na ọ na-akwagharị ya mgbe ọ na-agbaze. Osimiri ájá bụ ihe efu karịa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akụ́ mmiri igwe nke na-aga n'akụkụ osimiri ahụ.
Etu esi guzobe osimiri aja
Ihe mbụ gbasaa n'ụzọ dị ka osimiri nke ájá na Saudi Arabia adịghị ka nke ahụ. Ihe mbu bu na obughi na Saudi Arabia, kama na Iraq. Na njedebe nke afọ 2015, nnukwu mmiri ozuzo na oke mmiri igwe mmiri siri ike tara ahụhụ na mba niile ebe ihe kacha dị mma bụ okpomọkụ na-ekpo ọkụ nke ukwuu ọbụna n'oge ahụ n'afọ. Ọsọ na mmiri iyi niile wụsara ihe ndị dị n’ime ha na akụ mmiri ígwé n’elu osimiri Yufretis na Taịgris. Na mmiri ndị ahụ ga-abawanye ma ha ga-adọkpụ bọọlụ igwe ojii niile a n'otu oge ahụ ha na-agbaze n'ihi oke okpomọkụ.
Ka akụ mmiri igwe ndị a na-agabiga ebe aja, ha nwere ụcha aja. Ọ bụrụ na ị nọrọ n’ebe dị anya lee ya anya, ị ga-ahụ na ọ dị ka osimiri jupụtara n’ájá nakwa na ọ bụ ihe e ji rụọ ya. Agbanyeghị, ozugbo ịbịaru nso mmiri a na - aga n'ihu wee tinye aka gị na ị ga - ahụ na ha bụ akụ mmiri igwe.
Ihe omimi nke ihu igwe a na-eme n'ike n'ike n'ihi nsogbu gburugburu ebe obibi dị ka mgbanwe ihu igwe. Ihe omuma a nke emere na Iraq sokwara otu oge ezumike kachasi nke duru okpomọkụ ruo ogo 52 na Baghdad.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nhazi na mmalite nke osimiri aja.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Osimiri aja
Kedu onye dere edemede a maara na ọzara ahụ ị kpọtụrụ aha adịghị na Iraq? Rub al Khali bụ ọzara nke dị na ndịda ụsọ mmiri Arabian, ma gafere Saudi Arabia, Oman, Yemen na Emirates.
Yabụ na ihe adịghị mma n'isiokwu….
Kedu ka e si were sọlfọ ma ọ bụ abụọ na -asọba akụ mmiri igwe
Zaghachi Edgar m cruz
Rutherford atomic nlereanya